विगतमा सहमतिय नेतृत्वकै लागि दुई पटक पछि हटे, अब हट्दिन् : गंगा प्रसाद नेपाल - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
विगतमा सहमतिय नेतृत्वकै लागि दुई पटक पछि हटे, अब हट्दिन् : गंगा प्रसाद नेपाल
२०७४ साउन १० मंगलवार
नेपाल एसोसिएन अफ र्याफटिङ एजेन्ट्स (नारा) को निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै अब नाराको नेतृत्व कसको पोल्टामा जाला भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ । नाराको नेतृत्वका आकांक्षीहरु पनि यतीबेला आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउनमा व्यस्त छन् । पछिल्लो समय नाराको नेतृत्वको लागि गंगाप्रसाद नेपालको नाम पनि निकै चर्चामा रहेको छ । विगत दुई दशकदेखि नेपालको जलयात्रा व्यवसायमा आबद्ध नेपालको उम्मेद्वारीका विषयमा गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अशंः
नाराको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै अध्यक्षको उम्मेद्वारमा तपाईंको नाम पनि चर्चामा छ नी ?
हो, मैले यसपटक नाराको अध्यक्षका लागि उम्मेद्वारी दिने निर्णय गरेको छु । विगत दुई दशकभन्दा बढी लामो समयदेखि म जलयात्रा पर्यटनमा आबद्ध छु भने सन् १९९९ देखि नारामा कार्यसमिति सदस्य हुदैँ २ पटकसम्म महासचिवको जिम्मेवारी लिइसकेको छु । त्यसकारण अब म नाराको नेतृत्व लिएर नेपालको जलपर्यटनको विकासमा काम गर्न चाहन्छु ।
उम्मेद्वार हुन भनिरहँदा तपाईंको एजेण्डा चाहिँ के–के छन् ?
नेपालको जलयात्रा पर्यटनको प्रबद्र्धन गर्नु नै मेरो प्रमुख एजेण्डा हो । त्यसको साथै जलयात्रा पर्यटनमा पछिल्ला समय अनेकन समस्या र विकृतिहरु भित्रिएका छन् । त्यसको अन्त गर्दै व्यवसायीक हकहितमा काम गर्ने । अर्को महत्वपूर्ण कुरा अहिले नाराको सचिवालयको व्यवस्थापन राम्रो छ्न् । त्यसका लागि पनि हामी लाग्नेछौं ।
उम्मेद्वारको रुपमा अन्य व्यवसायीको नाम पनि चर्चामा छ । त्यसकारण तपाईंलाई चाहिँ कसको समर्थन छ ?
मलाई अधिकांश व्यवसायीहरुको समर्थन छ । यसअघि पनि मलाई सबैले अध्यक्षमा उठ्न आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, मैले सहमतिय नेतृत्वलाई प्रमुख ठान्दै अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिईन् । त्यसकारण यसपटक चाहिँ नारामा तपाईं जानपर्छ भन्ने साथीहरुको सद्भाव रहेको छ । त्यसकारण मैले उम्मेद्वारी दिने निर्णय गरेको हुँ ।
उसो भए सहमतिय आधारमा कसैलाई नेतृत्व सुम्पने पक्षमा यसपटक हुनुहुन्न ?
यो पटक मैले अध्यक्षको दावेदारी प्रस्तुुत गरिसकेको छु । अब म पछि हट्दिन् । मैले अघि पनि भने विगतमा सहमतिय नेतृत्वकै लागि भनेर मैले दुई पटक पछि हटेको हुँ । अब सहमति मेरै नेतृत्वमा हुनुपर्छ । त्यसकै प्रयासमा म लागिरहेको छु । यद्यपी त्यसो हुन सकेन भने अन्य प्रक्रिया त छँदैछ ।
उसो भए अहिले तपाईं प्यानल निर्माणको तयारीमा हुनुहुन्छ हो ?
प्यानल नै भन्दा पनि अहिले म कसरी अगाडि बढ्ने भनेर गृहकार्य गरिरहेको छु । मेरो नेतृत्वमा को–को जाने भन्ने कुरामा छलफल गरिरहेको छु । सबैलाई समेट्ने गरि एउटा सक्षम टिमको नेतृत्व गर्दै म नाराको नेतृत्व गर्न चाहन्छु । ताकी आगामी दिनमा काम गर्न पनि सहज होस् । म त्यसैको गृहकार्यमा छु ।
तपाईंले देखेको यस व्यवसायको समस्या चाहिँ के हो ?
यस व्यवसायमा जति सम्भावना छ । पछिल्लो समय उत्ति नै विकृती र विसंगतीहरु भित्रिएका छन् । जलहरुमा मनलाग्दी अव्यवस्थित रुपमा जलयात्रा संचालन गर्न थालिएको छ । सहरीकरणले गर्दा नदिहरु फोहोर हुँदै गएका छन् । त्यसकारण यस्ता धेरै समस्याहरु छन् । जसको छिटै समाधान नगर्ने हो भने भोली यो व्यवसाय नै संकटमा पर्न सक्छ ।